'' လွတ်ပြိုင်ကားပြိုင်ပွဲ '' အဘယျသို့ဆိုလိုသနညျး
'' လွတ်လပ်ခွင့် '' ကာလ၌ရှိသကဲ့သို့ '' အခမဲ့ 'ဖို့ Related ဘုံနာမဝိသေသန
လွတ်ပြိုင်ကားပြိုင်ပွဲအသုံးအများဆုံးစပိန်ဖြစ်ပါတယ် နာမဝိသေသန "အခမဲ့" အတွက် - ဒါပေမယ့်တာဝန်ခံသို့မဟုတ်ကုန်ကျစရိတ်မရှိဘဲမရရှိနိုင်ကြောင်းအရာတစ်ခုခုကိုရည်ညွှန်းဖို့အသုံးပြုမပေးပါ။ ကြောင်းအဘို့, လုနီးပါးအစဉ်အမြဲသုံးစွဲဖို့နှုတ်ကပတ်တရားတော်ကို gratis ဖြစ်ပါတယ်။
အဲဒီအစား, ထိုကဲ့သို့သော "လွတ်မြောက်ရန်" နှင့်အမျှစကားများနှင့်ဆက်စပ်သောလွတ်ပြိုင်ကားပြိုင်ပွဲ, "လွတ်လပ်မှု" များသောအားဖြင့်မရရှိနိုင်ဖြစ်ခြင်း၏သဘောအရတခါတရံထိန်းထိန်းသိမ်းသိမ်းသို့မဟုတ်အခမဲ့ဖြစ်ခြင်း၏သဘောအခမဲ့ဖြစ်ခြင်းကိုရည်ညွှန်းသည်။
2016 en, အာဂျင်တီးနား celebra 200 años del surgimiento က de una Nacional လွတ်ပြိုင်ကားပြိုင်ပွဲက y independiente ။ (2016 ခုနှစ်, အာဂျင်တီးနားအခမဲ့နှင့်လွတ်လပ်သောနိုင်ငံတစ်နိုင်ငံ၏နွေဦးထွက်၏နှစ် 200 ဂုဏ်ပြု။ )
soy hombre လွတ်ပြိုင်ကားပြိုင်ပွဲ။ အဘယ်သူမျှမ dependo က de nadie ။ (ကျနော်နေတဲ့လူလွတ်တယ်။ ငါမည်သူမဆိုအပေါ်မူတည်ပါဘူး။ )
Seréလွတ်ပြိုင်ကားပြိုင်ပွဲ cuando mis မျှesténaquí padres ။ (ကျွန်မရဲ့မိဘတွေကဒီမှာမဟုတ်သောအခါငါအခမဲ့ဖြစ်လိမ့်မည်။ )
¿Dónde encontrar cosméticosလွတ်ပြိုင်ကားပြိုင်ပွဲက de တိရိစ္ဆာန် crueldad? (အဘယ်မှာငါတိရစ္ဆာန်တွေကိုညှင်းပန်းနှိပ်စက်ခြင်းမရှိဘဲလုပ်အလှကုန်ကိုရှာတွေ့နိုင်ပါသည်?)
Dejaron တစ် los cinco presos libres ။ (သူတို့ကငါးလွှတ်ပေး။ )
အဘယ်သူမျှမhabía asiento လွတ်ပြိုင်ကားပြိုင်ပွဲala Vista ။ (ရှေ့တော်၌တခုရရှိနိုင်ထိုင်ခုံမရှိဘူးမဟုတ်ခဲ့။ )
hay una diferencia က de actitud entre la traducciónလွတ်ပြိုင်ကားပြိုင်ပွဲက y la traducciónပကတိ။ (ကအခမဲ့ဘာသာပြန်ချက်နှင့်ပကတိဘာသာပြန်ချက်များအကြားသဘောထားကတစ်ဦးခြားနားချက်ရှိပါသည်။ )
todo tienen derecho တစ် respirar aire လွတ်ပြိုင်ကားပြိုင်ပွဲက de humo ။ (လူတိုင်းမီးခိုး-အခမဲ့လေထုကိုရှူရှိုက်ခွင့်ရှိပါတယ်။ )
'' လွတ်ပြိုင်ကားပြိုင်ပွဲ '' အသုံးပြုခြင်းစာပိုဒ်တိုများ
စာပိုဒ်တိုများနှင့်တစ်ဦးများစွာသော စကားထူး လွတ်ပြိုင်ကားပြိုင်ပွဲကိုသုံးပါ။ အသုံးအများဆုံးများထဲတွင်:
absoluciónလွတ်ပြိုင်ကားပြိုင်ပွဲ - အပြစ်ရှိကြောင်းမစီရင်ချက်
aire လွတ်ပြိုင်ကားပြိုင်ပွဲ, အယ်လ် aire လွတ်ပြိုင်ကားပြိုင်ပွဲ - အိမ်ပြင်
Amore လွတ်ပြိုင်ကားပြိုင်ပွဲ - အခမဲ့ချစ်ခြင်းမေတ္တာ
caídaလွတ်ပြိုင်ကားပြိုင်ပွဲ - အခမဲ့ကျဆုံးခြင်း
Dar ကနေတဆင့်လွတ်ပြိုင်ကားပြိုင်ပွဲ - ခွင့်ပြုချက်ပေးရ
DIA လွတ်ပြိုင်ကားပြိုင်ပွဲ - နေ့ကချွတ်အလုပ်သို့မဟုတ်အခြားတာဝန်ဝတ္တရား
လွတ်ပြိုင်ကားပြိုင်ပွဲက de impuestos - အခွန်လွတ်
နပန်းကစားနည်းတစ်မျိုး - လှန်
mercado လွတ်ပြိုင်ကားပြိုင်ပွဲ - အခမဲ့စျေးကွက် (တစ်ဦးဘောဂဗေဒအသုံးအနှုန်း)
Paso လွတ်ပြိုင်ကားပြိုင်ပွဲ - အတားအဆီးအခမဲ့တစ်ခုခု
prensa လွတ်ပြိုင်ကားပြိုင်ပွဲ - အခမဲ့သတင်းစာ
Puerto လွတ်ပြိုင်ကားပြိုင်ပွဲ - အခမဲ့ port ကို
software ကိုလွတ်ပြိုင်ကားပြိုင်ပွဲ - Open-source ဆော့ဖ်ဝဲ
tiempo လွတ်ပြိုင်ကားပြိုင်ပွဲ - အခမဲ့အချိန်
tiro လွတ်ပြိုင်ကားပြိုင်ပွဲ - (ဘောလုံးထဲမှာရှိသကဲ့သို့) (ဘတ်စကက်ဘော၌ရှိသကဲ့သို့) အခမဲ့ပစ်အခမဲ့ကန်
trabajar por လွတ်ပြိုင်ကားပြိုင်ပွဲ - အလွတ်တန်းအလုပ်လုပ်ဖို့
'' လွတ်ပြိုင်ကားပြိုင်ပွဲ 'သို့ Related စကားလုံးများကို
အများဆုံးနီးကပ်စွာလွတ်ပြိုင်ကားပြိုင်ပွဲနှင့်ဆက်စပ်သောနှစ်ခုကြိယာ liberar နှင့် librar ဖြစ်ကြသည်။ Liberar ပိုဘုံသည်နှင့်များသောအားဖြင့်, လှတျမွောကျစဖြန့်ချိရန်သို့မဟုတ်ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးသို့မဟုတ်တစ်ဦးကိုတိရစ္ဆာန်လွှတ်မှဆိုလိုသည်။ Librar စိုးရိမ်ရေမှတ်တစ်စစ်ဆေးမှုများ (ငွေကြေးတူရိယာ) drawing, တိုက်ပွဲများနှင့်ထှနျးကနေတစ်စုံတစ်ဦးကိုချွေတာအပါအဝင်ထင်ရသောသက်ဆိုင်တဲ့အဓိပ္ပါယ်များအမျိုးမျိုးရှိပါတယ်။ အတော်ကြာဆက်စပ်လည်းရှိပါတယ် ဝင်းနာမ် librecambio (အခမဲ့ကုန်သွယ်ရေး), librecambista (အခမဲ့ကုန်သွယ်မှုထောက်ခံသူ) နှင့် librepensador (freethinker) အပါအဝငျ။
အခြားဆက်စပ်စကားလုံးများကို librado (ကစစ်ဆေးမှုများဆွဲယူသို့မဟုတ်ရေးသားခဲ့သည်သူတစ်ဦး), လစ်ဘရယ် (လစ်ဘရယ်) နှင့် libertad (လွတ်လပ်ခွင့်) တို့ပါဝင်သည်။
လွတ်ပြိုင်ကားပြိုင်ပွဲလွတ်ပြိုင်ကားပြိုင်ပွဲတစ်အလားတူအဓိပ္ပာယ်ကိုခဲ့သောလက်တင် Liberation ထံမှလာသည်။ Liberation ကနေလက်တင်ကြိယာ liberare အခမဲ့တင်ထားရန်အဓိပ်ပာယျ, သို့ရောက်ကြ၏။ ယင်း၏ အတိတ် participle , liberatus, ထိုကဲ့သို့သော "လွတ်မြောက်ရန်" နှင့်အဖြစ်အင်္ဂလိပ်စကားလုံးများ၏အရင်းအမြစ်ဖြစ်လာခဲ့သည် "လွတ်မြောက်မှုကို။ "
နမူနာစာကြောင်းများ TiempoSur, WHO.int, Veoverde.com အယ်လ် Sur က de Acapulco, မာရီယိုဇျ Martin နှင့် Wattpad.com ထံမှအဆင်ပြေအောင်ပါပြီ။
ဂျပန် Kanashii ၏အဓိပ္ပာယ်ကို
ပြင်သစ်ကြိယာ Voir Conjugating
Dewa မာတာ ashita - ရိုးရှင်းသောဂျပန်စကားစုများ
ပြင်သစ်နှုတ်ကပတ်တော်ကို "Mairie" ကိုမိတ်ဆက်
Ogenki desu ka - ရိုးရှင်းသောဂျပန်စကားစုများ
အီတလီအတွက်ကြိယာ "Parlare" Conjugate လုပ်နည်း
အင်္ဂလိပ်စပိန်သန်း '' ကူခြင်း '' Is - ဒါဘာလဲ?
တစ်ခုက SUV ကားမှထိပ်တန်း 10 ဦးအစားထိုး
နာမဝိသေသန Coordinate: အဓိပ္ပာယ်နှင့်ဥပမာများ
မကောင်းတဲ့ကြော်ငြာ: 10 Hilary Photoshop ကို Advertising ကြော်ငြာများတွင်အောင်မြင်မှုများ
တစ်ဦးသမတရွေးကောက်ပွဲတွင်အနိုင်ရရှိသွားပြီဘယ်တော့မှမကိုအဘယ်သူ5အမေရိကန်သမ္မတ
'' မိသားစုရန်ငြိုးထားခြင်း ': အဆိုပါဂိမ်း၏စည်းကမ်းများ
တစ်ဦးသည် သာ. ကောင်း၏ဝန်ခံ Make လုပ်နည်း
Fantasy Football League အမျိုးအစားများ
UC Riverside မှ GPA, SAT နှင့် ACT ဒေတာများ
အဆင့်မြင့်လက်နက်သင်တန်း: အပိုင်း2- Brachialis နှင့် Brachioradialis
တစ်ဦးအကြားအမြင်ရ Vampire တိုက်ခိုက်ဖွစျသှားဘယ်လိုနားလည်ခြင်း
Black က Powder (Safely) Make ရန်ကဘယ်လို
Desire Named A Streetcar - ရှိသူများက Eleven